China Steel T bowd Post oo leh warshad xoog badan iyo saarayaasha |Zhanzhi
Marka la barbar dhigo tiirarka xayndaabka caadiga ah, birta T xayndaabka ayaa ku siinaysa xalka ugu fiican ee lagu ilaalinayo dhirta ee xayndaabkaaga.
Tiirarka xayndaabka T waxay ka samaysan yihiin bir khafiif ah oo tayo sare leh.Marka la barbardhigo birta xayndaabka T, tiirarka xayndaabka T waxay leeyihiin godad joogto ah si ay si ammaan ah u xajiyaan khadadka xayndaabka kala duwan.Boostada xayndaabka T waxay leedahay xoog sare, iska caabin daxalka, caabbinta miridhku, rakibaadda fudud iyo nolosha adeeg dheer, waxayna si weyn u isticmaalaan jardiinooyinka ama beeraha si ay u hagaajiyaan deyrarka ama dhirta.
1) Daaweynta dusha sare: qaniinyada madow ee dahaarka leh, galvanized kulul la rusheeyey, PVC dahaarka leh, dhaldhalaalka dubay rinji, iwm
2) Nooca: qaabka T, oo aan lahayn birta
3) Qalabka: birta kaarboon yar, birta birta, iwm.
4) Midabka: cagaar madow, madow, ama sida looga baahan yahay macmiilka
5) Dhumucdiisuna: 2-6mm
6) Dhererka: 1.0m-2.5m, ama sida looga baahan yahay macmiilka
7) Xirmooyinka: 10 pcs / xidhmo, 50 xidhmo / palette.
Marka loo isticmaalo hagaajinta dhirta beerta, laga yaabaa in aad u baahan tahay birta T qaabka boosteejada bowd ee cabbirka kala duwan, dhererka iyo tirada godadka si Buur dhirta u dhiganta.Markaa waanu u habeyn karnaa si waafaqsan codsigaaga.
Tayo heer sare ah iyo kharash-oolnimo;
Naqshadaynta T-qaabeeya waxay ka hortagtaa foorarsiga;
Way fududahay in lagu wado dhulka - looma baahna in la qodo godad
Ka hortag burburka xiniinyaha;
Awood xoog leh oo ku habboon nooc kasta oo xayndaab ah;
Daxalka wanaagsan iyo iska caabinta miridhku;
UV u adkaysta iyo muuqaalka quruxda leh;
Waarta oo adeeg dheer.
Taageer silig goglan, deyrka garoonka, iwm;
Hagaaji dayrarka kala duwan sida xayndaabka beerta, deyrka daaqa, xayndaabka beerta kalluunka iwm;
Hagaajinta dhirta sida yaanyada, canabka iyo geedaha;
Dayrarka ilaalinaya waddooyinka waaweyn iyo waddooyinka.